Wararki ugu danbeeyey ee Kismaayo
Dadka reer Kismaayo ayaa sheegay in dagaalyahanada Al Shabab ay magaalada kala baxeen qalab iyo hub kadib marki ay kusoo dhawaadeen ciidamada huwanta ah.
Kismayo ayaa ah xarunta ugu weyn ee Al Shabab dalka Soomaaliya, waxaana hadii ay ka wada baxeen oo ay halkaasi qabsadaan ciidamada Amisom iyo kuwa Dowlada Soomaaliya waxa ay noqon doontaa dhabar jab xoog leh oo soo gaaray.
Wararka ayaa sheegaya in Al Shabab ay shalay rarteen idaacadi Andalus oo ku hadli jirtay codkooda isla markaana aheyd tan ugu weyn ee u qeybin jirtay idaacadaha kale ee hoos yimaada wararka, waxaa kale oo la sheegayaa in baabuur badan oo kala duwan ay magaalada uga baxeen.
Laakin Al Shabab ayaa beenisay wararkaasi, iyaga oo ku tilmaamay borobagaando dagaal oo iyaga ka dhan ah.
Afhayeen u hadlay Al Shabab o la yiraahdo Muhammad Usman Arus, ayaa u sheegay BBC-da in Al Shabab ay ku dileen dagaaladi ugu danbeeyey ilaa iyo 100 askari oo isugu jira ciidamada Kenya iyo kuwa Dowlada, isla markaana ay dib uga celiyeen magaalada Kismaayo.
“Anaga waxaan ku suganahay Kismaayo, waa been iyo borobogaanda warka dhahaya Al Shabab ayaa ka baxay magaalada, ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaalida mar hore ayey ka baxeen oo dib ayey ugu laabteen meelihi ay kasoo ruqaansadeen,” ayuu yiri.
Dadka deegaanka ayaa tilmaamaya in magaalada ay hada xasilantahay balse dadka qaarkii ay dhahayaan waxay Al Shabab kaga tageen dhalinyaro hubeysan oo magaalada gaaf waregaya kuwaasi oo toogan doono qofki ay u arkaan in ay kasoo horjeedaan.
Ciidamada Midowga Africa ayaa si tartiib ah ugu soo dhawaanayey magaalada Kismaayo bilooyinki lasoo dhaafay iyaga oo kaashanaya ciidamada Soomaalida, waxaana xalay ku baryeen meel aad ugu dhaw magaalada.
Bishi June, warbixin kasoo baxday Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in dhuxusha laga dhoofiyo dekedaha Kismaayo iyo Marka ay dhaqaala culus kasoo gasho Al Shabab, marki danbana Golaha Amaanka ayaa mamnuucay dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya.
Laakin wali waa la dhoofiyaa waxaana dalalka qaato ka mid ah Imaaraadka Carabta iyo dalka Sacuudi Carabiya.